အမွေးစားအမွေခံ – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on April 4, 2021 Author admin	Comments Off on အမွေးစားအမွေခံ
လက်ထဲမှာ ပူခနဲဖြစ်သွားသဖြင့် ဝေလင်း တစ်ယောက် ငေးမောပြီး အတွေးနွံထဲနစ်နေရာမှ သတိဝင်လာသည်။ သူ့လက်ထဲကစီးကရက်မီးက အစီခံကို ထိလာပြီးသူ့လက်ကို အပူဟပ် သွားသည့်တိုင်အောင် သူ့အသိစိတ်တွေက ဆုံးစမဲ့လွင့်မျှောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ၀မ်းနည်းစိတ်တွေကြောင့် သူ့ရင်ထဲမှာပြည့်ကျပ်နေသည်။ ဖေဖေ၊မေမေရဲ့သားအရင်းမဟုတ်ဖူးဆိုသော အသိကသူ့ရင်ထဲမှာ လွမ်းမိုးနေသည်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကိုမချစ်လို့လားချစ်ပါသည်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက သူ့ကိုသားအရင်းလိုပင် သဘောထားပြီး ချစ်ခဲ့ကြသည်။ သူ့ကလည်း ဖေဖေ ဦးဝေမင်းနှင့် မေမေဒေါ်ဖြူပြာလင်းတို့ကို ချစ်ပါသည်။ သူတို့(၂)ဦးက သူ့ကိုသူမတို့သားအရင်းပါဟုပင်အခုထိပြောနေကြတုန်းပင်။ မထင်မှတ်သော အကြောင်းအရာတစ်ခုကြောင့် သူသိခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ပြောရလျှင်တော့ မေမေ ဒေါ်ဖြူပြာလင်းမှာ ရှိနေသော နှလုံးရောဂါကြောင့် မမကြီး နီလာမင်းနှင့် မမလေး နီလာလင်းတို့ကို မွေးဖွားပြီးသည့်နောက်တွင် ယောင်္ကျားလေးလိုချင်သဖြင့်ကလေးထပ်ယူခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ထိုကိုယ်ဝန်ကား မေမေဖြူပြာလင်းတွင် အဖတ်မတင်ခဲ့။ ဆေးရုံတွင် ခက်ခက်ခဲခဲမွေးဖွားပြီး မေမေဒေါ်ဖြူပြာလင်းအသက်ကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့သော်လည်း မွေးဖွားလာသည့် ကလေးမှာ ဆုံးသွားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ဘယ်သူမှန်းပင် သေချာမသိသော သူ၏မိခင်က သူ့ကိုဆေးရုံမှာ မွေးဖွားပြီး ထွက်ပြေးသွားခဲ့သည်။
ဆေးရုံမှတ်တမ်းများမှာလဲ လိပ်စာလိမ်ဖြင့် ဆိုတော့ ဘယ်လိုမှစုံစမ်းမရခဲ့။ သို့ဖြင့် ယောင်္ကျားလေးအရူးအမူးလိုချင်နေသော ဖေဖေနှင့်မေမေကသူ့ကို အမွေစားအမွေခံစာချုပ်ဖြင့်မွေးစားခဲ့ကြသည်။ ထိုအကြောင်းများကို သူ(၁၀)တန်းအောင် တက္ကသိုလ်တက်သည့်အချိန်ထိမသိခဲ့ပါ။ သူထိုအကြောင်းများကို ဘယ်လိုသိလာရသလဲဆိုတော့.. အဓိကပြောရလျှင် မလတ်နီလာလင်းကို ဖေဖေ၊မေမေတို့မှ ပေးစားခဲ့သည့် သူ့ယောက်ဖ ကိုတင်မောင်ထွန်းနှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆုိုင်နေသည်။။ သောက်ကျင့်မကောင်းသော ထိုလူကြောင့် သူသည်ဖေဖေ၊မေမေတို့၏ မွေးစားသားဖြစ်ကြောင်း သူသိခဲ့ရပြီး အခုလိုစိတ်လေပြီး အိမ်မှာ မနေချင်သည့်အဆင့်အထိဖြစ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြောရလျှင်တော့ မလတ်နှင့်သူကားငယ်ငယ်ကတည်းကအရမ်းချစ်ကြသည်။ ဆိုးတူကောင်းဘက် တိုင်ပင်ဖောတိုင်ပင်ဖက်…သူ့စိတ်ထဲမှာ မလတ်ကိုသူသတိရလာသည်။ မလတ်ရယ်… သူ့စိတ်ကူးများက ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြသည့် မိသားစုဘ၀လေးဆီလွင့်မျှောသွားသည်။မလတ်နှင့်သူနှင့်ကား အသက်သိပ်မကွာ… မလတ်နှင့်သူနှင့် (၂)နှစ်သာ ကွာသဖြင့် သူတို့(၂)ဦးထက် (၆)နှစ်ကျော်လောက်ကြီးသော မကြီးနှင့် သူတို့ကြားမှာ တိုင်ပင်ရန်မ၀ံ့ရဲကြ။ မလတ်ကား ရုပ်တော်တော်လှသည်ဟု ဆိုရမည်။ မလတ်ကား(၉)တန်းကျောင်းသူဘ၀ ကတည်းကကြိုက်သူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေသည်။ မလတ်ကား သူနှင့်အတူကျောင်းသွားကြလျှင် စာလိုက်ပေးသောသူများ၏ စာများကို ပြုံးပြုံးလေးယူလိုက်တာဘဲ။
သူကမယူစေချင်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မလတ်ကို ပေးလာသောစာများကို မလတ်မဖျောက်ပစ်မိလို့ ဖေဖေမေမေတို့တွေ့သွားလျှင် မလတ်ကိုရိုက်တာကြောင့်။ ဒါကြောင့် ရည်းစားစာတွေပေးလာလျှင်.မလတ်ကိုမယူစေချင်ကြောင်းပြောပေမဲ့.. မလတ်ကတော့ သူ့ကိုဒီလိုကြိုက်တဲ့သူများတာကို သဘောကျနေပုံပင်။ သူမကစာများကိုယူလာပြီး သူ့ကိုထိုသူများရေးသော ရည်းစားစာကိုပြကာ နှစ်ယောက်အတူ စာကျက်ရင်းပြကာ ခိုးဖတ်ရင်း အရေးအသားများကိုရီကြသည်။ ဒါပေမဲ့မလတ်က စာညံ့သည်။ စာမေးပွဲ (၁)နှစ်ကျပြီး (၁၀)တန်းနှစ်တွင် သူနှင့်အတူတူတက်ခဲ့ရသေးသည်။ သူစာမေးပွဲအောင်လို့ တက္ကသိုလ်တက်တော့ မလတ်ကား ဆယ်တန်း(၂)ခါမြောက်ကျသည်။ ဖေဖေမေမေတို့က… ကျမှာပေါ့…စာမလုပ်ဘဲ..ရည်းစားဘဲထားနေတာကိုလို့ပြောတော့ မလတ်ငိုသည်။ မလတ်ကိုသူသနားမိသည်…မလတ်သည်သူ့ကိုလာပေးသည့်ရည်းစားစာများကိုယူသော်လည်း ရည်းစားမထားခဲ့တာသူအသိဆုံး။ မလတ်၏ ဥာဏ်ထိုင်းမှုကြောင့် ကျတာပင်။ မလတ်ကိုသူကဘဲချော့ရသည်…ဖေဖေမေမေတို့ပြောတာကိုစိတ်ထဲမထားပါနဲ့ပေါ့ မလတ်ကား နေပါစေမောင်လေးရယ်..မလတ်ရဲ့ကံပေါ့.. တကယ်တော့ မလတ်ရည်းစားမထားဘူးဆိုတာ မောင်လေးအသိဆုံးပါလို့ ငိုယိုပြီးပြောခဲ့တာကို သူ့မျက်လုံးကမထွက်သေးဘူး။ ဒီလိုနဲ့ သူဒုတိယနှစ်တက်လို့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမလတ်ကို အိမ်ကယောင်္ကျားပေးစားဖို့စီစဉ်နေပါပြီ။ ခြေငြိမ်အောင်လို့တဲ့။ ကိုတင်မောင်ထွန်းတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးပင်။ ဖေဖေမေမေတို့နဲ့ထိုလူရဲ့မိဘတွေက ရင်းနှီးကြသည်။
ထိုမှစပြီး ပေးစားဖို့ရာ အထိဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့စီစဉ်ရခြင်းမှာလည်း ဖေဖေမေမေတို့က မကြီးတုန်းကသူတို့အသိတစ်ယောက်ရဲ့သား ဆရာဝန်တစ်ဦးနဲ့ ပေးစားခဲ့တာ အဆင်ပြေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ မကြီးယောင်္ကျား ကိုကြီးကိုကိုအောင်က ခင်မင်ဖို့ကောင်းသလို သူနဲ့မလတ်ကိုလည်း သူ့ညီလေး၊ညီမလေးတွေလိုချစ်တဲ့အပြင် မကြီးနီလာမင်းအပေါ်မှာလည်း ခင်ပွန်းကောင်းပီသတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ သူမှတ်မိပါသည်။ မလတ်ကို စေ့စပ်မည့်ညက။ သူကျောင်းကနေပြန်လာပြီး တစ်ပတ်ခန့်အကြာ မလတ်အခန်းအရှေ့ကအဖြတ်.. အခန်းထဲမှ မလတ်ရဲ့ငိုသံလိုလိုကြားရတာကြောင့်..သူဘာများဖြစ်တာလဲဆိုပြီး.. မလတ်အခန်းထဲဝင်သွားခဲ့တယ်။ မလတ်ဟာ သူ့အခန်းထဲက ကိုယ်လုံးပေါ် မှန်ကြီးရှေ့မှာ ကျုံကျုံ့လေးထိုင်ပြီး ငိုနေတာပါ။ သူဝင်သွားတော မလတ်ကိုမေးပါတယ်.ဘာဖြစ်တာလဲလို့.လို့ပေါ့။ မလတ်ကသူ့ကိုဖက်ပြီး ငိုပါတယ်.. မလတ်ကို ဖေဖေတို့ကယောင်္ကျားပေးစားတော့မယ်…အဲ့ဒါနင်မသိဘူးလားမောင်လေး..။ မနက်ဖြန်မနက်မှာ ဧည့်သည်တွေလာမယ်ဆိုတာ..မလတ်ကိုစေ့စပ်ပေးဖို့မောင်လေးရယ်… မျက်ရည်တွေ တွေတွေကျနေတဲ့ မလတ်ကိုသူဘယ်လိုကနေဘယ်လိုနှစ်သိမ့်ရမှန်းမသိပါဘူး။ မလတ်ကပြောပါသေးတယ်..သူရုပ်မလှခဲ့ရင်ကောင်းမှာတဲ့.. အဲ့ဒါဆိုရင် အခုလိုသူမချစ်မနှစ်သက်တဲ့သူနဲ့ပေးစားခံရမှာမဟုတ်ဖူးတဲ့လေ…။ ခက်တာက လိုက်ပြေးရအောင်လည်းမလတ်မှာရည်းစားမရှိတာသူအသိဆုံး။ ဒီလိုနဲ့ဘဲမလတ်ဟာ ဖေဖေမေမေတို့ ပေးစားတာကိုယူဖို့အထိဖြစ်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီကိုတင်မောင်ထွန်းကို အရင်ကတည်းကသူလည်းသဘောမကျပါဘူး အိမ်ကိုလာရင် သူ့ကိုကလေးလိုလိုဆက်ဆံတာရယ် အထက်စီးကဆက်ဆံပြီဒ မာနတစ်ခွဲသားနဲ့ကြောင့်မို့လို့ သူမျက်နှာကျောကိုမတည့်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဖေဖေမေမေတို့ကတော့ မလတ်ရဲ့သဘောကို ဘာမှမမေးဘဲ.. အခုလို အတင်းအကျပ်စီစဉ်တဲ့ အတွက် သူလည်းမကျေနပ်ပေမဲ့ ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သူ့ကိုဖေဖေမေမေတို့က ကလေးတစ်ယောက်လိုဘဲမြင်ကြတာမဟုတ်လား။ သူအဲ့ကိစ္စကို အဲ့ညမှာ ဖေဖေမေမေတို့ကိုသွားပြောပါသေးတယ်.။ ဖေဖေမေမေတို့က သားငယ်..ဒီကိစ္စမှသားငယ်ဝင်မပါပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တာကြောင့် သူလက်လျှော့ခဲ့ရတာပါ။ ဒီလိုနဲ့ မလတ်ကိုစေ့စပ်ပေးပြီး နှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာ မလတ်နဲ့ အဲဒီကိုတင်မောင်ထွန်းဆိုတဲ့လူဟာ မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်မှ မလတ်ဧည့်ခံတဲ့နေရာမှ လူသေကောင် တစ်ယောက်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေခဲ့တာသူမှတ်မိပါသေးတယ်။ ညဖက်ရောက်တဲ့ အခါမှာတော့ မကြီးယောင်္ကျားကိုကြီး ကိုကိုအောင်တို့အုပ်စုကို ကိုတင်မောင်ထွန်းက ဘက်ချလာနိုက်ဆိုပြီးဧည့်ခံတဲ့နေရာမှာ သူလည်းပါသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီဧည့်ခံပွဲမှာ ပြသနာကစတော့တာပါဘဲ။ မူးယစ်ရီဝေနေတဲ့ ကိုတင်မောင်ထွန်းဟာမပြောသင့်တဲ့စကားတွေကို အရက်ဝိုင်းမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီစကားတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာကတော့.. သူဟာ ဖေဖေမေမေတို့ရဲ့သားအရင်းမဟုတ်ဘဲ မွေးစားသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။ ကိုကြီး ကိုကိုအောင်ကတားမြစ်ပေမဲ့… သူ့ရဲ့အဖေနဲ့အမေဟာ သူ့ကို အမွေစားအမွေခံသားအဖြစ်မွေးစားရာမှာ ကိုတင်မောင်ထွန်းက သူ့မိဘတွေ သက်သေအဖြစ်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြောင်း မူးပြီး ပြောပါတော့တယ်။သူကြားကြားချင်းမယုံကြည်နိုင်ခဲ့..။ သို့သော်လက်မခံချင်သောအမှန်တရား တစ်ခုကိုသူသိခဲ့ရပြီး မူးမူးနဲ့ပေါက်ကွဲခဲ့သည်။ တစ်ဖက်ဝိုင်းမှ လူတစ်ယောက်နဲ့ငြိပြီး ရိုက်ပွဲဖြစ်ကာ လူတစ်ယောက်ကိုရိုက်မှုဖြင့် သူအချုပ်ခန်းသို့ ပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ဖူးခဲ့သည်။
သို့သော် အချုပ်ထဲတွင် တစ်ညပြည့်အောင်မနေခဲ့ရပါ.။ မိဘများက မြို့မျက်နှာဖုံးများပီပီ..တစ်ဖက်သားကိုကျေနပ်လောက်အောင်တောင်းပန်ကာ ညတွင်းချင်း သူ့ကိုအချုပ်ခန်းထဲမှ လာထုတ်ခဲ့သည်။ ဖေဖေကသူ့ကိုတစ်ချက်မှမဆူပါ။ မေမေနှင့်မလတ်ကတော့ ငိုလိုက်တာကိုမပြောနှင့်တော့။ မကြီးနှင့် ကိုကြီးကိုကိုအောင်တို့ကတော့ နဂိုကအေးအေးသမားတွေမို့ဘာမှမပြော။ သူအိမ်ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း သူ့ကိုဘာမှမဆူကြ.။ မလတ်ရဲ့အသစ်ကျပ်ချွတ်ယောင်္ကျားပြသနာကို စဖန်တီးခဲ့သူကိုတင်မောင်ထွန်းကတော့ ရှက်သည်ဆိုပြီး ရဲစခန်းသို့ပင်လိုက်မလာခဲ့.။ သို့သော်သူ့အနေဖြင့် အိမ်ပြန်ရောက်သည်နှင့် မေမေဖြူပြာလင်းကိုသူကိုမွေးစားထားတာ ဟုတ်မဟုတ်မေးတော့သည်။ မေမေကငိုပြီးမပြောပေမဲ့ နောက်ဆုံးသူအတန်တန်ငိုပြီးပြောသည့်အခါတွင်တော့.. မေမေကသူ့ကိုအမွေစားအမွေခံသားအဖြစ်မွေးစားထားသည့်စာချုပ်ကိုပြသည်။ ဖေဖေကတော့မျက်နှာမကောင်းလှ။ သူ့ကို မောင်လေးအရင်းအဖြစ်သာသိကြတော့ မလတ်သည်လည်းသူနှင့် မောင်နှမအရင်းမဟုတ်မှန်း ထိုအခါမှသိကြတော့သည်။ ဖေဖေနှင့်မေမေနှင့်သိနေသောမကြီးကလည်း သူငယ်စဉ်ကတည်းက အများမသိအောင်သာမက မလတ်ကိုပါမသိအောင်ဖုံးဖိထားခဲ့ပြီး.. သူ့အပေါ်အချစ်ပိုခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ထိုအချိန်မှ စတင်ပြီးသူ့စိတ်တွေပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ဖေဖေနှင့်မေမေ၏သားအရင်းမဟုတ်မှန်းသိလိုက်ရသော အချိန်မှစတင်ပြီး အားငယ်စိတ်တွေဝင်လာခဲ့သည်။ ဒီအိမ်ကြီးနှင့်ဒီမိသားစုသည်သူနှင့်မဆိုင်တော့သလိုလို.. သို့နှင့် သူလည်းစိတ်လေလေနှင့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အိမ်မှာသွားနေခဲ့သည်..။
မေမေကသူ့ကို တော်တော်ချစ်သည်ဟုဆိုရမည်.။ နေ့တိုင်းလာလာခေါ်သည်.. ဖေဖေလည်းကျန်းမာရေးမကောင်းဘူး…သားအတွက်နဲ့စိတ်တော်တော်ထိခိုက်နေတယ်လို့ ပြောရှာသော်လည်း မေမေကိုယ်တိုင်လည်း နှလုံးရောဂါရှိနေသည်ကိုသူသိသဖြင့် သူ့အနေဖြင့် စိတ်က လွန်ဆွဲနေရသည်။ မကြီးကလည်းမကြာခဏလာခေါ်သဖြင့် အိမ်ကိုပြန်ခဲ့သည်။ ယခုအချိန်မှာတော့ သူအိမ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ သူ့စိတ်တွေကပျော်ပျော်ရွင်ရွင်မရှိဘဲ အထီးကျန်သလိုခံစားနေရသဖြင့် မြို့အပြင်မှာရှိတဲ့ ရှုခင်းသာဆိုတဲ့ တောင်ကုန်းနေရာလေးမှာ ဝေလင်းတစ်ယောက် အတွေးနယ်ချဲ့နေခြင်းသာဖြစ်ပေတော့သည်။ အိမ်ရှေ့ကို ဆိုင်ကယ်ရပ်သံကြားရတယ်.. မောင်လေးပြန်လာပြီထင်တယ်ဟု မလတ်တွေးထင်လိုက်မိသည်…။ သူမအခန်းရှေ့မှ မောင်လေးရဲ့ခြေသံကို ကြားရသည်။ မောင်လေးဝေလင်းကား နည်းနည်းသောက်လာဟန်တူသည်…။ တံခါးကိုဟပြီးချောင်းကြည့်လိုက်တော့ မောင်လေးသည် ဖေဖေနဲ့မေမေရဲ့အခန်းတံခါးရှေ့မှာ ရပ်နေတာကိုတွေ့ရသည်..။ မမကြီးက ကိုကိုကြီးအပြောင်းကျရာနယ်သို့လိုက်သွားပြီ..။ ဖေဖေကလည်းခရီးထွက်သွားသည်.. အိမ်မှာ သူမရယ်၊မေမေရယ်၊အိမ်ဖော်မလေး မိအေးဘဲရှိတယ်။ .မေမေကတော့မောင်လေးစိတ်နဲ့ပင် နှလုံးရောဂါကပြန်ထနေသဖြင့် ညနေကပင် ဆရာဝန်လာကြည့်ပြီး ဆေးထိုးပေးထားသဖြင့် အိပ်မောကျနေဟန်တူသည်။ ကိုတင်မောင်ထွန်းကတော့ ညနေကတည်းက အပြင်ကိုကားတစ်စီးနဲ့ထွက်သွားပြီ..။ မောင်လေး…အခန်းရှေ့ရပ်နေသော ဝေလင်းမှာ..နောက်မှခေါ်လိုက်သံကြောင့်တုန်သွားသည်..။ မလတ်အသံ…။
မေမေနေမကောင်းဘူးမောင်လေးရယ်..မလတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့မလတ်မျက်ဝန်းတွေက အားငယ်နေသည့်ပုံစံတွေ။ သူ့ရင်ထဲလှိုက်ခနဲဖြစ်သွားသည်။ ဘာဖြစ်မှန်းမသိ။ မလတ်ကို အခုလိုအနေအထားမျိုးမြင်ရတိုင်း ဘာဖြစ်လို့လဲမသိ မလတ်ကိုသူသနားသည်။ မောင်လေးရယ်..အိမ်မှာဘဲနေပါကွယ်… ဝေလင်းစိတ်ထဲမှာတော်တော်ဝမ်းနည်းလာသည်..။ မဖြစ်ဖူး..မမ…ကျွန်တော်ကလေ…ကျွန်တော်က.. မေမေရဲ့သားအရင်း..မလတ်တို့ရဲ့မောင်အရင်းမှမဟုတ်တာ… မလတ်မျက်ရည်လေး တွေစို့လာသည်။ စိတ်ထဲမှာဝမ်းနည်းမှုကြောင့်တလှပ်လှပ်ဖြစ်လာသည်.. မောင်လေးရယ်..နင်ဒီလိုတော့မပြောပါနဲ့.. ဘယ်သူတွေဘာပဲပြောပြော…နင်ဟာ ဖေဖေ၊မေမေတို့ရဲ့သား မလတ်တို့ရဲ့မောင်လေးဘဲ… အပြင်ကပြန်လာတာဆိုတော့ဘာမှမစားရသေးဘူးထင်တယ်..။ ဝေလင်းစိတ်ထဲလည်းဆာသလိုလိုဖြစ်နေသည်မို့ ခေါင်းကိုငြိမ့်ပြလိုက်သည်…။ မလတ်လဲဆာတယ်… လာ..မလတ်ခူးကျွေးမယ်..မောင်လေး..။ မလတ်က ဝေလင်းကို ထမင်းစားခန်းထဲကိုခေါ်သွားသည်။ မေမေနေမကောင်းသဖြင့် သူမနှင့်မိအေးကလည်းပြုစုနေရသဖြင့်..ဘာမှဖွယ်ဖွယ်ရာရာမချက်နိုင်။ ညနေကတည်းက သူမလည်းစိတ်နှင့်လူနှင့်မကပ်သဖြင့် ဘာမှမစားဖြစ်။ ထမင်းကို ဆီ/ဆားနှင့်နယ်ပြီး.ငါးခြောက်ကြော်ဗူးထဲမှ ငါးခြောက်ကိုယူကာ နယ်လိုက်သည်။ အင့်..ပါးစပ်ဟ..မောင်လေး.. ကလေးတစ်ယောက်လိုပင်..ဝေလင်းကိုငယ်ကတည်းကသူမကအဲ့လိုခွံ့နေကျ.. ပလုပ်ပါးလောင်းနှင့် သူမခွံ့နေသော ထမင်းကို မောင်လေးဝေလင်းစားနေတာကိုကြည့်ပြီး သူမကြည်နူးမိသည်..။ သြော်..သူမရဲ့ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့ အချိန်လေးတွေက အတိတ်မှာကျန်ခဲ့ရပါပြီလေ။
မောင်လေးကို ထမင်းခွံ့ကျွေးရင်းသူမလည်းစားရင်း.. ၀မ်းနည်းစိတ်ကြောင့် ကျလာသောမျက်ရည်လေးတွေက ပန်းကန်ပေါ်ကျသွားသည်။ ဝေလင်းအဖို့ဒါကိုမြင်လိုက်ရပြီး သူ့ရင်ထဲမှလည်း ဆို့တက်လာလေသည်.. သြော်…မလတ်ရယ်.။ သူ့စိတ်ထဲကမလတ်ကို အရမ်းကို သနားမိနေပါတော့တယ်။ မောင်လေးကား မေမေ့ကိုကြည့်ပြီး…ငိုသည်.. အသံမထွက်ဘဲမျက်ရည်တွေကျနေသည်.. ထိုအချိန်မှာ အိမ်ရှေ့မှ ဆူညံသော အသံတွေကြားရသည်..။ ကိုတင်မောင်ထွန်း မူးမူးနဲ့ပြန်လာပြီလေ..ဒီလိုပဲ..အမြဲတမ်းမူးပြီးပြန်လာတယ်။ နီလာ…နီလာ…ကိုယ့်ကိုလာတွဲဦး..ဝေါ့.. ရှေ့မှာ အန်နေသံကိုကြားရသည်..။ မလတ်က အိမ်အောက်ကို ကဗျာကယာဆင်းပြီး လင်ဖြစ်သူကိုသွားတွဲရသည်။ ကိုတင်မောင်ထွန်းက သီချင်းတွေ အော်ဟစ်ပြီးဆိုနေသေးသည်.. ကားတံခါးကိုပင် မပိတ်နိုင်တော့..။ ရှင်..ဒီအရက်တွေသောက်လာပြန်ပြီလား..မေမေနေမကောင်းဘူးဆိုတာသိရက်နဲ့.. ချစ်လို့ကြိုက်လို့ယူထားရတဲ့ လင်မယားမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ သူတို့အိမ်ထောင်ရေးကလည်းအဆင်မပြေ။ သောက်ပိုတွေပြောမနေနဲ့…နားငြီးတယ်..ငါမူးနေပြီ.. ကိုတင်မောင်ထွန်းက ပြောရင်း ကားတံခါးကို ခြေထောက်နှင့်ကန်ပြီးပိတ်လိုက်သည်..။ မူးနေသော ကိုတင်မောင်ထွန်းကို သူမတို့အခန်းထဲတွဲပြီး ခေါ်သွားလိုက်သည်။ အိမ်ခန်းထဲရောက်သည်နှင့် ကိုတင်မောင်ထွန်းကသူမကိုကုတင်ပေါ်တွန်းလှဲလိုက်သည်…။ စိတ်မပါဘဲ…အခုလို မလွဲသာလို့ဆက်ဆံနေရတာ..သူမမင်္ဂလာဦးညကတည်းကပါဘဲ.။ ကိုတင်မောင်ထွန်းသည် သူမကို ချစ်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ရာဂကြောင့်သာဆက်ဆံနေခြင်းဖြစ်သည်။ သူမဘ၀မှာ အချစ်ဆိုတာဘာမှမသိလိုက်ခင်လေးမှာ ကိုတင်မောင်ထွန်းနဲ့ယူခဲ့ရသည်။
မလတ်ရဲ့ နို့တွေကို ကိုတင်မောင်ထွန်းက ကြမ်းတမ်းစွာဆုပ်နယ်နေသည်။ နာကျင်သော်လည်း မလတ် အံကျိတ်ကာခံနေသည်။ ၀ဋ်ကျွေးရှိသမျှခံရပေဦးမည်။ သူမထမိန်ကိုလှန်တင်ပြီး ပေါင်ကိုဖြဲကာ အသားကုန်ထိုးတော့သည်။ အသေကောင်တစ်ကောင်လို မလတ်ငြိမ်ခံနေပြီး ဘာမှတုန့်ပြန်ခြင်းမရှိ။ ပြီးပြီးရောသာ..သဘောထားလိုက်သည်။ ဘာမှသူမစိတ်ထဲမှာမရှိတော့…လောကကြီးမှာ မချစ်မနှစ်သက်သူနဲ့ပေါင်းသင်းပြီး အသက်ရှင်နေရတာပင်ပန်းလှပါပြီ။ နောက်ဆုံးကိုတင်မောင်ထွန်းကား သူ၏ဆန္ဒပြည့်ဝသွားပြီး သူမဘေးမှာ တရှုးရှုးဖြင့် အိပ်ပျော်သွားလေပြီ။ မလတ်ကားအိပ်မပျော်နိုင်ပါ… အိပ်ယာပေါ်မှာ ထထိုင်လိုက်ပြီး ထောင်ထားသော ဒူးနှစ်ဖက်ကို လက်နဲ့ပိုက်ပြီး အသံမထွက်အောင် ကျိတ်ငိုနေပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဟနေတဲ့ အခန်းတံခါးကြားကနေကြည့်နေတဲ့ ဝေလင်းလည်း နံရံကိုကျောမှီပြီး ရင်ထဲကဆို့တက်လာတာနဲ့အတူ မျက်ရည်တွေကပါးပြင်ပေါ်ကျလာပါတယ်..။ သြော်..မလတ်ရယ်..မလတ်ရဲ့ရင်ထဲကိုမြင်ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်နာကျင်ရပါတယ်ဗျာ…။ မလတ်ကား သူ့ရင်ထဲကဝေဒနာတွေကို မပြောဘဲ ကျိတ်မှိတ်ခံနေရတာမြင်ရတော့ သူ့ရင်ထဲမှာ တဆတ်ဆတ်နာကျင်နေပြီး.. အခန်းထဲကို ၀င်ကာ မလတ်ကို နှစ်သိမ့်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကတော့ နေမကောင်းလို့အိပ်ပျော်နေတဲ့ မေမေ့ အခန်းဆီသို့သာ တစ်လှမ်းချင်း ရွေ့လျားသွားပါတော့တယ်။ဆးရှိန်နဲ့အိပ်ပျော်နေသော..မေမေ့ရဲ့မျက်လုံးတွေက ပွင့်လာသည်.. မေမေက သူ့ကိုမြင်တော့ တော်တော်ဝမ်းသာသွားသည်…။ သားငယ်…မေမေ့ဆီကိုပြန်လာတာပဲ..အဟွတ်..အဟွတ်… မေမေကားချောင်းဆိုးနေသည်… သူကရေတစ်ခွက်ကို ခပ်က မေမေ့ကိုထွေးပွေ့ပြီး ရေကိုယုယုယယတိုက်လိုက်သည်။။ မေမေကား မျက်ရည်တွေကျပြီး.. သားရယ်..ဘေးလူတွေပြောတာကိုသားစိတ်ထဲမထားပါနဲ့…။ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ်…သားဟာမေမေတို့ရဲ့သားအရင်းဘဲ…။
သားဘယ်ကိုမှသွားစရာမလိုဘူး…မေမေတို့နဲ့ဘဲနေပါသားရယ်… စိတ်မကောင်းလှစွာဖြင့် ဝေလင်းလည်း မေမေဖြူပြာလင်းကိုဖက်ပြီး ငိုပါတော့တယ်။ သားဘယ်ကိုမှမသွားတော့ပါဘူးမေမေရယ်… မေမေကား ၀မ်းသာစွာပြုံးလိုက်ပြီး..မေမေခေါင်းတွေမူးတယ်သားရယ်.. အဲ့ဒါဆိုလည်း ခဏလောက်အိပ်လိုက်တော့လေ..မေမေ။ မေမေကား မကြာမှီပြန်လည်အိပ်ပြောသွားသည်။ သူ့အိပ်ထောင်ထဲမှဖုန်းက မည်လာသည်။ ညကြီးမှဘယ်သူပါလိမ့် ဖုန်းကိုကြည့်လိုက်တော့ သူ၏ကောင်မလေး မျိုးမျိုးသွယ်…. ပြောရလျှင်တော့ မျိုးမျိုးသွယ်နှင့် သူကားကျောင်းတက်စဉ် သမီးရီးစားဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ မျိုးမျိုးသွယ်ကို သူချစ်ပါသည်။မျိုးမျိုးသွယ်တို့မိဘတွေကလည်း သူ့မွေးစားမိဘတွေလို ချမ်းသာသော အသိုင်းအ၀ိုင်းကတွေပင်။ ဝေလင်းကား အခန်းတံခါးကို မေမေမနိုးစေရန်အတွက် အသာအယာပြန်စေ့ထားခဲ့ပြီး အိမ်အောက်ထပ်သို့ဆင်းခဲ့သည်..။ ပြောလေ..မျိုး…ဘာရှိလို့လဲ..။ တစ်ဖက်မှ မျိုးမျိုးသွယ်ရဲ့အသံလေးက တုန်ယင်စွာဖြင့် ထွက်ပေါ်လာသည်။ မျိုးကိုမေ့လိုက်ပါတော့ ကို… ဘာ….. ဟုတ်တယ်ကို..မျိုးလေအိမ်ကပေးစားတဲ့သူနဲ့ယူရတော့မယ်…။ သူ့စိတ်တွေ ဗလောင်ဆူသွားသည်..။ မျိုး…အကိုတို့ခိုးပြေးကြရအောင်… မခိုးပါနဲ့တော့ အကိုရယ်…မျိုးလေဖေဖေတို့မေမေတို့ကိုကြောက်တယ်…။ မျိုးကို့ကိုချစ်ပါတယ်..မျိုးကိုနောင်ဘ၀ထိမုန်းလိုက်ပါ..ကို မျိုးမျိုးသွယ်ကား ပြောပြီးဖုန်းချသွားသည်။ သူပြန်ခေါ်သော်လည်း ဖုန်းကမကိုင်တော့ တောက်….သစ္စာဖောက်မ… သူဒေါသထွက်လွန်းသဖြင့် အသားများပင်တုန်လာသည်။ လောကကြီးကမတရားလှချည်လား။ ချစ်သူကလည်းသစ္စာဖောက်။ တကယ်တော့ မျိုးမျိုးသွယ်လေပြေလေးကိုသုံးသွားမှန်း သူသဘောပေါက်သည်။
သူ့ကိုမွေးစားသားမှန်းသိကတည်းကမျိုးမျိုးသွယ်ရောသူမမိဘတွေရော ဆက်ဆံရေးတွေ အနည်းငယ်ပြောင်းသွားတာသူသတိထားမိသည်။ သွားပေဦးတော့…မျိုးမျိုးသွယ်ရေ… ဂုဏ်ရှိန်တွေကမက်မောတဲ့သူတွေ..လောကကြီးမှာတယ်ပေါပါလား.. မေတ္တာစစ်က ဘယ်မလဲကွာ…သူဒေါသထွက်စွာဖြင့်တွေးနေမိပါတယ်။ ညကမေမေနားမှာ တစ်ချိန်လုံး ထိုင်ကာစောင့်ကြည့်နေသော ဝေလင်းလည်း အိပ်ပျော်တစ်ချက် မပျော်တစ်ချက်ဖြင့် မနက်(၇)နာရီခန့်တွင်…အိပ်ယာမှနိုးလာသည်.။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မလတ်တို့အခန်းမှစကားများသံသဲ့သဲ့ကိုကြားရသည်။ စကားများနေကြတာထင်တယ်..။ သူ့အနေနဲ့ဝင်ပါလို့မကောင်း..သူနှင့်မလတ်ကားအရင်ကလိုမောင်နှမအရင်းလို အနေအထားမျိုးဆိုဝင်ပါလို့ကောင်းတယ်။ ဖြန်း..မလတ်ပါးကို ကိုတင်မောင်ထွန်းရိုက်သောအသံကိုကြားရသည်.. ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းသောစကားသံများကလည်းထွက်ပေါ်လာသည်။ မဖြစ်တော့… သူမေမေမနိုးအောင်အခန်းတံခါးကိုဖွင့်ပြီးထာသွားသည်…။ မလတ်ကားကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ထိုင်ရက်လဲကျနေပြီး ပါးတွင်အနီစင်းကြီးနဲ့..။ ကိုတင်မောင်ထွန်း…ခင်ဗျားတော်သင့်ပြီထင်တယ်…သူဝင်ပြောလိုက်တော့ ကိုတင်မောင်ထွန်းက မျက်ထောက်နီကြီးနဲ့..သူ့ကိုကြည့်ပြီး…။ မင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့ ၀င်ပြောရတာလဲ..ဟောကောင်။ဒါငါ့မိန်းမ..ငါရိုက်ချင်ရင်ရိုက်မယ်။ ကိုတင်မောင်ထွန်း..အပြောကြာင့်..သူနည်းနည်းဒေါသထွက်သွားသည်..။ ဒီမှာ…မလတ်ကကျုပ်အမဗျ..ခင်ဗျားတော်တော့.. ပြောကာမှပိုဆိုးလာသည်…ဟက်ဟက် အရမ်းချစ်ကြတာဘဲနော်.. မောင်နဲ့အမက…မသိရင်သမီးရီးစားကျနေတာဘဲ…ထွီ.. ခင်ဗျား…လျှောက်မပြောနဲ့…ခင်ဗျားစိတ်များမှတ်နေလား..။
သူအရမ်းစိတ်ဆိုးသွားသဖြင့် ဒေါသထွက်ထွက်နှင့် ကိုတင်မောင်ထွန်းကိုရန်ပြုမည်ကြံစဉ် မလတ်က ကြားထဲမှဝင်ပါလာသည်။ တော်တော့မောင်လေး…ကိုတင်မောင်ထွန်း..ရှင်လဲတော်တော့.. မေမေ့ကိုသနားကြပါဦး.. တကယ်တန်းကျတော့ ကိုတင်မောင်ထွန်းကလူကြောက်တစ်ယောက်ပင်…။ သူတကယ်လုပ်မည်ကြံတော့ရွံ့နေသည်…။ အဲ့ဒါဆိုရင်..ငါသွားမယ်…ညမိုးချုပ်မှပြန်လာမယ်..ဒီအိမ်မှာနေရတာစိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်.. ကိုတင်မောင်ထွန်းကားခြေသံပြင်းပြင်းဖြင့်ပင်..အိမ်အောက်ထပ်သို့ခြေသံပြင်းပြင်းဖြင့်ပင် ဆင်းသွားသည်။ စကားများနေသံကို အိပ်ယာမှ နိုးလာသော ဒေါ်ဖြူပြာလင်းတစ်ယောက်. ကောင်းကောင်းကြီးကြားနေရပါတယ်…. အင်း…ငါမှားပြီ…ငါမှားပြီ..လို့လဲသူမကိုယ်သူမအပြစ်တင်နေပါတယ်။ သမီးလတ်စိတ်ဆင်းရဲနေရတာ သူမကြောင့်ပါလား… သြော်..သမီးရယ်…မေမေ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါကွယ်… မျက်ဝန်းထောင့်မှ မျက်ရည်စလေးများကား ခေါင်းအုံးပေါ်ကို ကျသွားပါတယ်။ သားငယ်သူမအခန်းထဲဝင်လာတာကြောင့်..သူမအိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်ပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် နှလုံးတွေကလည်း မခံမရပ်နိုင်အောင်နာကျင်ပြီး မောလာပါတယ်။ ညကလဲ ကိုတင်မောင်ထွန်းပြန်မလာ..မလတ်ဒေါသထွက်သလိုလိုဖြစ်နေသေးသည်။ သို့သော် ကိုတင်မောင်ထွန်းပြန်မလာတာကိုပင်သူမကျေနပ်သလိုလို။ ပြန်လာတိုင်းလည်း မူးလို့ဆိုတော့စိတ်ညစ်သည်။ ဒီအချိန်လောက်ဆို ဟိုတယ်တစ်ခုခုမှာကောင်မတစ်ကောင်ကောင်နဲ့ပျော်နေတုန်းနေမှသေချာသည်။ မချစ်မနှစ်သက်ဘဲလက်ထပ်ခဲ့ရသော်လည်း သူမဇနီးကောင်းပီသအောင်ကြိုးစားခဲ့ပါသေးသည်။ ဒါပေမဲ့ သူကလည်း သူမကိုစက်ရုပ်တစ်ရုပ်လိုသဘောထားနေသည်။
ငွေဖြင့် ၀ယ်ခံရသောအရုပ်တစ်ရုပ်လိုပင်သူမဘ၀က။ ညကကောင်းကောင်းအိပ်မပျော်သော်လည်း အစောကြီးနိုးခဲ့သည်။ မောင်လေးအခန်းကို ကြည့်လိုက်တော့မောင်လေးမရှိ။ အပြင်ထွက်သွားသည်နှင့်တူသည်။ မေမေ့အခန်းမှာတော့ မေမေအိပ်ပျော်နေဆဲပင်။ အောက်ထပ်ကိုဆင်းလာခဲ့သည်။ အိမ်ဖော်မလေးကလဲမရှိ ဈေးသွားသည်နှင့်တူသည်။ ကလင်..ကလင် ဧည့်ခန်းမှ စားပွဲပေါ်က တယ်လီဖုန်းမည်လာသည်။ သူမဖုန်းကိုကောက်ကိုင်လိုက်သည်….။ ဟဲလို..ပြောပါရှင်… ဒေါ်ဖြူပြာလင်းတို့အိမ်ကပါလား….။ဟုတ်ပါတယ်ရှင့်…။ ဒေါ်ဖြူပြာလင်းများရှိပါသလားခင်ဗျ…။ မေမေနေမကောင်းလို့အိပ်ပျော်နေပါတယ်ရှင့်..ကျွန်မကိုပြောလို့ရပါတယ်.. ကျွန်မသူ့သမီးပါ….။ သြော်…ပြောရမှာတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာ..ဦးက..(xx)မြို့ကရဲစခန်းကစခန်းမှူးပါ..။ ဦးဝေမင်းတစ်ယောက် ကျွန်တော်တို့မြို့မှာ သူ့ကားနဲ့ကုန်တင်ကားတစ်စီးနဲ့ တိုက်မိပြီး အခင်းဖြစ်နေရာမှာဘဲ…ပွဲချင်းပြီးဆုံးသွားပါတယ်…အဲ့ဒါကာယကံရှင်မိသားစုတွေသိဖို့… ရှင်…ဖေဖေဆုံးပြီ….. ဟဲလို…ဟဲလို….ဆက်ပြောသော စခန်းမှူး၏ဖုန်းထဲမှအသံများကို မလတ်မကြားတော့…။ မျက်ရည်များက သူမပါးပေါ်ကိုပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကျလာသည်။ ဆို့နင့်လာသော ရင်ဘတ်ထဲမှ အလုံးကြီးက ရင်ခေါင်းထဲအထိတက်လာသည်။ မျက်လုံးများပြာဝေလာပြီးနေရာတင်ဘဲခွေလဲကျသွားသည်။ အပြင်မှ ပြန်လာသောဝေလင်းလည်း ကြားလိုက်ရသော မလတ်၏အသံနှင့် မြင်လိုက်ရသောမြင်ကွင်းကြောင့် ကြောင်အကြီးငေးကြည့်နေသည်…။ အိမ်အပေါ်ထပ်မှာ နေရတာငြီးငွေ့လာသော ဒေါ်ဖြူပြာလင်းတစ်ယောက်လဲ ယောင်္ကျားဖြစ်သူ ကိုဝေမင်းဆုံးပြီဆိုသော အသံကိုကြားလိုက်သဖြင့် နှလုံးက မခံနိုင်တော့ဘဲ စူးအောင့်လာပြီး… သူမနားထဲမှာနောက်ဆုံးကြားလိုက်တာကတော့ ဈေးဝယ်ရာမှ ပြန်လာတဲ့ အိမ်ဖော်မလေးရဲ့အသံ…. လုပ်ကြပါဦး…မေမေကြီးဘာဖြစ်သွားတာလဲမသိဘူး…ဆိုတဲ့အသံ။
သူမအတွက်တစ်လောကလုံးအမှောင်အတိကျသွားပါတယ်။ အလင်းတန်းတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်…..အလင်းတန်းထဲမှာကိုဝေမင်းပါလား… ပြုံးလို့ရွှင်လို့….သူမဆီကို ကိုဝေမင်းကလက်ကမ်းပေးတာကိုတွေ့သည်…။ သူမနှုတ်မှအသံမထွက်လာ..ကိုဝေမင်းရဲ့လက်တွေဆီကို သူမလက်တွေကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ သူမ စိတ်တွေနွေးထွေးလုံခြုံသွားသလိုခံစားလိုက်ရသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ကိုဝေမင်းလက်ကိုဆွဲပြီး ကောင်းကင်ပေါ်ကိုတက်သွားသလိုခံစားရသည်။ သူမကိုယ်သူမအပျိုဘ၀တုန်းကလိုခံစားရတယ်။ ပျော်လိုက်တာကိုဝေမင်းရယ်…ကျွန်မမှာပျော်ရွှင်မှုတွေပျောက်ဆုံးနေတာကြာပြီ….. အခုမှဘဲပြန်ရတော့တယ်…ရှင့်ကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာကွယ်…။ မေမေနှင့်ဖေဖေ၏ ရက်လည်ဆွမ်းကျွေးပွဲလေးကား ပြီးဆုံးတော့မည်။ အမျှ…အမျှဖေဖေနဲ့မေမေရယ်…ရောက်ရာအရပ်ကသာဓုခေါ်ပါတော့…။ သားနောင်ဘ၀ကျရင် ဖေဖေနဲ့မေမေတို့ရဲ့ သားအရင်းဖြစ်ပါရစေဖေဖေနဲ့မေမေရယ်။ သားကိုခွင့်လွတ်ပါတော့. ဝေလင်းကား ကျဆင်းလာသောမျက်ရည်များကို လက်ခုံဖြင့်သုတ်လိုက်ပြီး ဆိုလိုက်ပါတယ်။ မလတ်ကတော့ တရှုံ့ရှုံ့ငိုနေသည်။ ကိုကိုကြီးနှင့် မမကြီးကတော့ လူကြီးပိုင်းရင့်ကျက်တည်ငြိမ်သူတွေမို့ထင်သည်။ ခံစားနေရတာကမျက်နှာပေါ်မှာ ပေါ်လွင်နေပေမဲ့ မျက်ရည်တော့မကျအောင်ထိန်းထားနိုင်တာတွေ့ရသည်။ ကိုတင်မောင်ထွန်းကတော့ ရေစက်ချသည့်နေရာပင် မလာသူ့အခန်းထဲမှာ သောက်နေပြီ။ ဖေဖေနဲ့မေမေရေ အမျှအမျှအမျှ…. မလတ်တစ်ယောက် အမျှဝေရင်းလဲကျသွားတာကို သူမြင်လိုက်သည်။ ဟဲ့ဟဲ့..လုပ်ကြပါဦး…ခြေမကိုချိုး.. ဆူညံသွားသော အသံများနှင့်အတူ…မလတ်ကိုသတိလည်လာစေရန်ဝိုင်းဝန်းပြုစုနေကြသည်။ ရှိုက်သံများနှင့်အတူ မလတ်သတိရလာသည်။ ကဲကဲ…လတ်လတ်ကိုအခန်းထဲလိုက်ပို့လိုက်ကြ…ဘယ်သူပြောမှန်းပင်မသိလိုက်။ မမကြီးက မလတ်ကိုတွဲနေသည်…။
ဒါပေမဲ့ မမကြီးကမလတ်ကိုတွဲရာမှာ မလတ်ကမမကြီးထက်ထွားနေသဖြင့်မမကြီးယိုင်သွားသည်။ ဝေလင်းလည်း မြင်မကောင်းတော့သဖြင့်သူဝင်ထိန်းလိုက်သည်…။ မမကြီးဖယ်လိုက်တော့…မောင်တွဲမယ်… ဝေလင်းက မလတ်ကို ချိုင်းအောက်မ၀င်ထမ်းပြီး တွဲခေါ်သွားသည်။ အပေါ်ထပ်ကိုတက်သော လှေခါးများကမြင့်နေသလိုလို… ယိုင်နဲ့နေသောမလတ်ခန္ဓာကိုယ်က သူ့အပေါ်မှီတွယ်နေသည်.. မလတ်၏ ကိုယ်သင်းနံ့လေးကို သူ့နှာခေါင်းဝလေးမှာရနေသည်…။ သနပ်ခါးပင် မလိမ်းထားသော မလတ်၏ ရနံ့လေးက သူ့ရင်ကို တုန်သွားစေသည်။ ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိ။ မလတ်ကားသူမတို့လင်မယားအိပ်သော အခန်းရှေ့ကိုရောက်လာပြီ။ မလတ်က သူ့ကိုတစ်ချက်မော့ကြည့်သည်…။သူနှင့်ကိုယ်ချင်းခွာလိုက်သည်။ ပြန်တော့မောင်လေး….မမအခန်းထဲဝင်တော့မယ်…။ မလတ်၏ မှေးစင်းနေသော မျက်ခွံဖောင်းဖောင်းလေးများကသွေးကြောစိမ်းလေးများပင်မြင်ရသည်။ မျက်လုံးလေးများက ရဲတွတ်နေသည်။ မျက်ရည်ဥလေးကမလတ်မျက်ဝန်းထောင့်မှ စီးကျလာသည်။ သူ့ရင်ထဲမှာ လှိုက်ခနဲဖြစ်သွားသည် အရမ်းကိုဝမ်းနည်းလာမိသလိုလိုဘဲ။ မခံမရပ်နိုင်အောင်ရင်ထဲမှာ နာကျင်လာသည်။ ထိုအချိန်မှာပင် အခန်းတံခါးကပွင့်လာသည်…ကိုတင်မောင်ထွန်း…။ သူတို့နှစ်ဦးကို မသင်္ကာသောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်နေသည်။ မလတ်မူးလဲသွားလို့ လိုက်ပို့တာလို့သူပြောလိုက်တယ်… အော်..အေး..ဆိုပြီးပြန်ပြောတယ်လို့ထင်တာဘဲ…. သူလည်း တိတ်ဆိတ်စွာဘဲ…အောက်ထပ်ကိုပြန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော့အတွက် အမွေကိုမလတ်ကိုဘဲပေးလိုက်ပါ…ကျွန်တော်မယူချင်ဘူး… ကိုတင်မောင်ထွန်း မျက်နှာဝင်းလက်သွားသလိုဘဲ။ ကိုကိုကြီးနှင့်မမကြီးက…။ မရဘူး..မောင်လေး…နင်ယူကိုယူရမယ်…နို့မို့ဆိုနင်ဘာလုပ်စားမှာလဲ…။
ဖေဖေနဲ့မေမေကလည်းဒီလိုလုံးဝဖြစ်စေချင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ မလတ်ကလည်းသူ့အိမ်ထောင်နဲ့သူ။ မလတ်ကလည်းပြတ်သားသည်…။ မလတ်လုံးဝမယူဘူးနော်မောင်လေး….အားလုံးအညီအမျှခွဲပေးထားတာ…မောင်လေးယူကိုယူရမယ်။ ကိုကိုကြီးကလည်း.. ငါ့ညီရာ မင်း..ကိုကြီးတို့မကြီးတို့ကို မောင်နှမလိုသဘောထားတယ်ဆိုယူပါ…လို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ ကိုတင်မောင်ထွန်းကတော့ သူရမဲ့ငွေထုပ်ကြီးကို အလွယ်တကူလက်လွတ်လိုက်ရလို့ သိပ်မကြည်ပါဘူး။ အမွေစာချုပ်စာတမ်းတွေအကုန်လုံးရှေ့နေကြီးနဲ့ရပ်ကွက်လူကြီးတွေရှေ့မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့ အခါမှာတော့…။ ရှေ့နေကြီးနဲ့ အရပ်လူကြီးများရှေ့မှာ ကျွန်မတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်ဆိုပြီး.. မလတ်က စာချုပ်တစ်ခုကိုရှေ့ကိုချလိုက်ပါတယ်။ ကွာရှင်းစာချုပ်တစ်ခုပါ…။ မမကြီးနဲ့သူကတော့ မလတ်ကိုနားမလည်နိုင်စွာကြည့်နေပါတယ်။ ကျွန်မကိုကွာပေးပါ..ကိုတင်မောင်ထွန်း….. ကိုတင်မောင်ထွန်းရော ထိုင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးအံ့အားသင့်သွားပါတယ်။ ရှင်နဲ့ ကျွန်မက မိဘတွေပေးစားလို့ယူခဲ့တာ..ဒီတော့ဖေဖေမေမေလဲဆုံးပြီ…။ ရှင်နဲ့ကွာဖို့ဘဲကျန်တော့တယ်…ရှင်ကျွန်မရမဲ့အမွေထဲက ဒီအိမ်ကြီးကလွဲရင်ကြိုက်တာယူသွားနိုင်တယ်..။ အရေးကြီးတာက ရှင်နဲ့မပေါင်းရရင်ပြီးရော။ ကိုတင်မောင်ထွန်းမျက်နှာနီသွားပါတယ်…ဒါပေမဲ့သူလည်းယောင်္ကျားဘဲလေ… မလတ်ဆီကမျှော်လင့်မထားတဲ့စကားကိုကြားပေမဲ့ ကြိုက်တာယူသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားကို သူကျေနပ်သွားဟန်တူတယ်။ ဒါဆို..မင်းနဲ့ငါနဲ့ရပြီးမှ ၀ယ်ထားတဲ့ ကားကိုငါယူသွားမယ်။ကျေနပ်တယ်နော်… မမကြီးနဲ့ကိုကိုကြီးရော အရပ်လူကြီးတွေဘာဘာမှဝင်ပြောချိန်ကို မရလိုက်ပါဘူး။ မလတ်ပုံစံက ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြတ်သားမဲ့ပုံစံ။ ကားကသိန်း(၁၀၀၀)ကျော်လောက်တန်တဲ့ကားပါ…ဒီကားကဖေဖေမေမေတို့ဝယ်ပေးထားတာပါ မလတ်ကတော့မှုဟန်မတူပါဘူး..။
ကိုကိုကြီးကတော့ စိတ်မွန်းကျပ်လာဟန်တူပါတယ်။ အပြင်ကိုထသွားတယ်…သူလည်းစိတ်ကျဉ်းကျပ်လာတာကြောင့် လိုက်သွားပါတယ်။ ခြံရှေ့မှကိုကိုကြီးကစီးကရက်တစ်လိပ်ကို သူ့အိပ်ကပ်ထဲကထုတ်ပြီး ဖွာရင်းငေးနေပါတယ်။ သူရောက်သွားတော့ ကိုကိုကြီးကဘာမှမပြောဘဲ သူ့ကိုဆေးလိပ်တစ်လိပ်ထုတ်ပေးတယ်။ သူလည်း ဆေးလိပ်ကိုမီးညှိလို့ရှိုက်ဖွာရင်း လမ်းမဘက်ကို တောင်စဉ်ရေရာမရအတွေးတွေနဲ့အတူ ငေးမောနေပါတော့တယ်။ ကိုကိုကြီးနှင့် မမကြီးလည်းနယ်ကိုပြန်သွားပြီ။ အိမ်ဖော်မလေးကလည်း သူမနယ်ပြန်သွားပြီဖြစ်သည်။ အိမ်အပေါ်ထပ်မှ အထုပ်များကိုဆွဲကာ ကိုတင်မောင်ထွန်းဆင်းလာပြီ။ သူမကို မထီတထီကြည့်လိုက်သေးသည်။ အခုတော့..မင်းဘင်္ဂလားမောင်နဲ့…မင်းနဲ့ဘဲကျန်တော့တယ်နော်…ဟက်ဟက်… ခနဲ့တဲ့တဲ့အပြောကို မလတ်ကလည်း ချက်ချင်းပြန်ပက်လိုက်ပါသည်… ဒါရှင့်အပူမပါပါဘူး…. အေးပေါ့လေ…အေးပေါ့….ဟက်ဟက် ကိုတင်မောင်ထွန်းက မထီတရီအပြုံးဖြင့် သူမကိုကြည့်ကာ ခနဲ့ရယ်ရယ်ပြီ သူ့အထုပ်များကိုကားပေါ်တင်သည်။ ကားတံခါးကို တမင်သက်သက် ဒုန်းခနဲ အသံမကျယ်ကျယ်အောင်ပိတ်လိုက်သေးသည်။ ကားစက်ကို တဗျည်းဗျည်းမြည်အောင်လုပ်သေးသည်။ နောက်ဆုံး ကြမ်းတမ်းစွာမောင်းထွက်သွားသည်။ လွတ်ပြီ..ကျွတ်ပြီဟု မလတ်ဝမ်းသာစွာရေရွက်လိုက်သည်။ သူမစိတ်တွေကဒေါင်းမလေးတစ်ကောင်လို မြူးကြွနေသည်..။ ပေါ့ပါးလန်းဆန်းစွာ သူမအခန်းထဲကို ၀င်ကာ အိမ်ယာပေါ်ပက်လက်လှန်ပစ်လဲချလိုက်သည် မျက်လုံးများကိုမှေးမှိတ်လိုက်သည်။ သို့သော်ခဏပင် မအိပ်နိုင်…စိတ်တွေကလှုပ်ရှားလာသဖြင့်မှန်တင်ခုံရှေ့ကိုသွားလိုက်သည်။ ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ကြီးရှေ့ကထိုင်ခုံမှာ ထိုင်ကာ ဆံပင်များကိုသူမသေချာစွာဖြီးနေသည်။ မျက်နှာကို မိတ်ကပ်ပါးပါးလေးဖို့လိုက်သည်။ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို နှုတ်ခမ်းနီပါးပါးလေးဆိုးလိုက်သည်။ သြော်…ဒီနေ့မှ ဘာကြောင့်များအလှပြင်ချင်နေပါလိမ့်ကွယ်… သူမကိုယ်သူမပင်နားမလည်နိုင်။ စိတ်တွေကလန်းဆန်းတက်ကြွနေလို့ထင်သည်။
သူမဒီလိုမနေဖြစ်ခဲ့တာကြာပြီ…. အ၀တ်ဘီရိုကိုဖွင့်လိုက်ပြီး ၀တ်စုံများကိုတစ်စုံပြီးတစ်စုံထုတ်ဝတ်ကြည့်သည်။ မှန်ရှေ့တွင် တစ်ကိုယ်လုံးကိုလှည့်ပတ်ပြီး သူမလှမလှကြည့်လိုက်သေးသည်။ အပျိုတွေပင်ရှုံးလောက်အောင်လှနေသော သူမကိုယ်လုံးအလှကိုကြည့်ပြီး သူမ ခစ်ခနဲရီလိုက်သေးသည်။ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ…မောင်လေးကို သူမလှမလှမေးချင်စိတ်တွေပေါ်လာမိတယ်။ အခုမှသတိရတယ်..မောင်လေးဘာလုပ်နေပါလိမ့်… မနက်ကတည်းက အခန်းထဲကလဲထွက်မလာဘူးဟု သူမတွေးမိသည်..။ သူမသိချင်စိတ်ကို ထိန်းမရတော့ မောင်လေးဝေလင်းရဲ့ အခန်းဘက်သို့ သူမကိုယ်သူမမသိလိုက်ခင်မှာပင် ခြေလှမ်းများက တရွှေ့ရွှေ့ လှမ်းသွားလေတော့သည်။ ဝေလင်းက စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးလိုက်သည်…။ အမွေလွဲစာချုပ်…မလတ်ကိုသူ့ရလိုက်သော အမွေတွေအားလုံးကို လွဲပေးလိုက်သောစာချုပ်။ ဘယ်ကိုသွားရမှန်းတော့ သူမသိသေး။ ဒီအိမ်ကြီးမှာ သူဆက်မနေချင်တော့။ ယခုတလော မလတ်မျက်နှာကို သူစေ့စေ့မကြည့်ရဲတာတော့အမှန်။ သူ့ အိတ်ကိုဆွဲလိုက်သည်……စားပွဲပေါ်မှာတော့ မလတ်ကိုနှုတ်ဆက်သည့်စာနှင့်စာချုပ်ကို ပန်းအိုးဖြင့်ဖိလိုက်သည်။ ဒါဘာ.လုပ်တာလဲမောင်လေး…. အခန်းတံခါးကပွင့်နေသဖြင့် မလတ်ဝင်လာတာကို သူမသိလိုက်…။ သူတစ်ချက်တုန်သွားသည်…။ ကျွန်တော်သွားတော့မယ်..မလတ်…သူ့အသံကတုန်ယင်စွာထွက်ပေါ်လာသည်…။ မလတ်ထံမှရှိုက်သံကထွက်ပေါ်လာသည် မလတ်ငိုနေသည်…။
မကြားချင်ယောင်ဆောင်ပြီး သူ့ခြေလှမ်းများကိုကျောခိုင်းလိုက်သည်…။ နေဦးမောင်လေး…မလတ်မေးစရာရှိတယ်… မလတ်ကိုကျောပေးရပ်နေရင်းစကားကိုသူနားထောင်နေလိုက်သည်…။ မောင်လေးမလတ်ကိုတစ်ယောက်ထဲဒီအိမ်ကြီးမှာထားခဲ့တော့မှာပေါ့.. ထားနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့…မောင်လေး… မလတ်ကရှိုက်သံတစ်ဝက်ပါသော အသံတုန်တုန်လေးဖြင့်မေးနေသည်။ ဟုတ်…ဟုတ်…တယ်..သူ့အသံကလည်းတုန်တုန်ယင်ယင်ဖြင့်ဖြေလိုက်သည်… မင်း..မလတ်မျက်နှာကို စေ့စေ့ကြီးပြီးဖြေပါမောင်လေး… မလတ်သူ့ဆီလျှောက်လာသော ခြေသံကိုကြားရသည်… သူလှည့်လိုက်သည့် အချိန်တွင် မလတ်က သူ့နောက်နားအရပ်ဆိုတော့… မလတ်နှင့်သူနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်သွားသည်။ နှုတ်ခမ်းနီဆိုးထားသော မလတ်၏ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကတဆတ်ဆတ်တုန်နေသည်..။ မလတ်ရဲ့ကိုယ်သင်းနံ့လေးကို သူရနေပြီ။ သူမလတ်ကို ကြောက်နေသလိုလို ခံစားရတယ်။ မလတ်ကသူ့မျက်နှာကိုမော့ကြည့်နေတယ်။ မျက်ဝန်းထောင့်ကမျက်ရည်တွေကျလာပါတယ်။ ဝေလင်းသူ့ကိုယ်သူ ဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိလိုက်ခင်မှာဘဲ မလတ်ရဲ့မျက်ဝန်းထောင့်က မျက်ရည်လေးကို သူ့လက်မနဲ့ ယုယစွာသုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်… မငိုပါနဲ့…မလတ်ရယ်…ဆိုပြီး ဘယ်လိုကနေဘာတွေသူလုပ်လိုက်တယ်မသိပါဘူး…. မလတ်ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကို သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ သိုင်းဖက်လိုက်ပါတယ်။ ပွေ့ဖက်ခံလိုက်ရသော မလတ်လဲ မောင်လေးရဲ့ အနမ်းတွေကို ကြည်ဖြူစွာခံယူနေသည်။ တစ်ဆတ်ဆတ်တုန်နေတဲ့ သူမနှုတ်ခမ်းလေးကို မောင်လေးရဲ့နှုတ်ခမ်းနဲ့တေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတေ့ာ သူမစိတ်တွေ အရမ်းကိုလှုပ်ရှားလာပြီး မောင်လေးရဲ့နှုတ်ခမ်းကို သူမအငမ်းမရပြန်စုပ်နေပါတယ်။
အသက်ရှုသံတွေလဲပြင်းလာပါတယ်။ မောင်လေးကနှုတ်ခမ်းချင်းတေ့စုပ်ပြီး သူမကိုယ်လုံးလေးကို ချိုင်းကလက်တစ်ဖက်ကမ တံကောက်ကွေးနားကနေတစ်ဖက်ကမပြီး စွေ့ခနဲပွေ့ချီကာ အနမ်းမိုးတွေရွာလိုက်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ရင်သားတွေကလည်း မောင်လေးရဲ့ရင်အုပ်ကျယ်ကြီးမှာ ပိပြားနေပါတယ်။ သူမကိုယ်လုံးလေးကို မောင်လေးကကုတင်ပေါ် တင်လိုက်ပြီး အပေါ်ကနေသူမကို ထပ်လို့ အတင်းကိုအနမ်းမိုိးတွေရွာပါတော့တယ်။ မလတ်စိတ်ထဲမှာကြည်ဖြူစွာပါဘဲ..ကိုတင်မောင်ထွန်းနဲ့တုန်းကဒီလိုမျိုးသူမစိတ်တွေတစ်ခါမှ သူမမဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဖူးတာအမှန်ပါ.။ သူမအကျီကြယ်သီးတွေကို မောင်လေးလက်က တစ်ဗြုတ်ဗြုတ်နဲ့ ဆွဲဖြုတ်ကုန်ပါပြီ။ မြန်ဆန်လွန်းလှပါတယ်.။ မောင်လေးဝေလင်းရဲ့ ခါးအောက်ပိုင်းက မလတ်ရဲ့ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှာရောက်နေပြီး မောင်လေးရဲ့ ပုဆိုးအောက်ကမာကျောနေတဲ့ ပူပူနွေးနွေးအချောင်းကြီးက သူမရဲ့ ရွှေကြုတ်လေးအမြောင်းမှာ ပွတ်သပ်နေတာကြောင့် သူမရင်ခုန်သံတွေကလဲ တဒုတ်ဒုတ်နဲ့မြည်နေပါတယ်။ စကားတစ်လုံးမှ မပြောကြဘဲ မောင်လေးရဲ့လက်ကသူမထမိန်ကိုဆွဲချွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူမလက်ကလည်းမောင်လေးရဲ့ ပုဆိုးကိုချွတ်ပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ။ မောင်လေးရဲ့အောက်ခံဘောင်းဘီကို သူမကဘဲ အနမ်းခြင်းဖလှယ်ရင်းဆွဲချွတ်လိုက်တော့ မောင်လေးဝေလင်းရဲ့ ဒုတ်ကြီးကလည်းပေါ်လာပါတယ်။ မောင်လေးရဲ့ဒုတ်ကြီးကိုသူမလက်နဲ့ ဆွဲကိုင်လိုက်ပြီး သူမရွှေကြုတ်အ၀လေးနဲ့တေ့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ မောင်လေးက လည်း အငမ်းမရ အတင်းကိုထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်။ ဒုတ်ခနဲ အရင်းထိထောက်သွားတဲ့ အချိန်မှာ အင့်ခနဲသူမအသံထွက်ပြီး မောင်လေးရဲ့ ကျောပြင်ကြီးကို မောင်လေးချိုင်းအောက်ကနေလက်ရှိုလို့ဖက်ထားပါတယ်။ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုလည်းမောင်လေးရဲ့ခါးကို ချိန်လိုက်ပါတယ်။
မောင်လေးလက်တွေက မွေ့ယာပေါ်ထောက်ပြီး မလတ်ကိုအပီကြုံးတော့တာပါဘဲ။ မလတ်ကလည်း ယုယကြည်ဖြူစွာနဲ့ သူမမောင်လေးဝေလင်းရဲ့ဒုတ်ကြီးကို သူမရဲ့ ရွှေကြုတ်အတွင်းသားလေးတွေနဲ့ဖမ်းဖမ်းညှစ်ကာ သူမခါးကိုကော့ကော့ပေးနေပါတယ်။ အင့်အင့်.ဆိုတဲံအသံလေးက မလတ်နှုတ်ဖျားက ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ သူမလက်တွေကလည်း ဝေလင်းကိုလွှတ်ထွက်သွားမှာစိုးတဲ့အလား အတင်းကိုဖက်ထားပါတယ်။ နာရီဝက်လောက် ဝေလင်းတစ်ယောက် မလတ်ရဲ့ရွှေကြုတ်ကြီးထဲကို သူ့ဒုတ်ကိုထည့်ပြီး သွင်းထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာ သူ့အချောင်းကြီးကကျင်တက်ပြီး စိမ့်လာသလိုလိုဖြစ်လာပါတယ်…ထိုအချိန်မှမလတ်မျက်နှာကလည်းတစ်မျိုးလေးဖြစ်သွားပြီး မလတ်ရဲ့လက်ချောင်းတွေဟာ သူ့ကျောကို အတင်းကုတ်လို့ ကော့ကော့ပေးလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ သူ့ဒုတ်ထဲကနေ ပြစ်ခနဲပြစ်ခနဲပန်းထွက်သွားတဲ့ အချစ်ရေတွေဟာ မလတ်ရဲ့ ရွှေကြုတ်အတွင်းသားနံရံတွေကိုပန်းထွက်သွားသလို…မလတ်ရဲ့ရွှေကြုတ်ထဲ ကထွက်ကျလာတဲ့ အရည်တွေနဲ့သူ့အရည်တွေဟာ သူ့ဒုတ်ကြီးစိုက်ထားတာကို နှုတ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ မလတ်ရဲ့ရွှေကြုတ်ထဲက ယိုဖိတ်ကျလာက မလတ်ရဲ့ဖင်ကြားထဲကို လိမ့်ဆင်းသွားပါတော့တယ်။ သူလည်းမလတ်ကိုယုယစွာဖြင့် အပေါ်က နေထပ်ပြီး မလတ်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးကို သူ့နှုတ်ခမ်းနေ့ တေ့ကာ နမ်းရင်း…အမောဖြေနေပါတော့တယ်.. မလတ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်း သူ့လိုဘဲကြည်နူးဝမ်းသာမှု ချစ်ခင်စုံမက်မှုကို အသေအချာခံစားနေရမယ်ဆိုတာ စကားတစ်ခွန်းမှပြောစရာမလိုဘဲသိလိုက်ပါပြီလေ… သြော်…မလတ်ရယ်…တကယ်တော့..ကျွန်တော်ဟာ ..မလတ်အနားကနေဘယ်ကိုမှမသွားနိုင်ဘူးဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သိလိုက်ပါပြီလေ…..ပြီးပါပြီ။
အောင်အောင်။ တစ်ယောက်တည်းဆိုတဲ့အသိနဲ့ မကောင်းတာလုပ်ရန်အဆင်သင့်။ မျက်နှာမူရာမှာရှိတဲ့TVထဲကကိုယ်တုံးလုံး ဖိုမစုံတွဲရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့် ကာမစိတ်တွေတဟုန်ထိုးဆောင့် တက်လာရ၏။ လက်တစ်ဖက်ကလျော့တိလျော့ရဲ ပုဆိုးကြားမှာရှိတဲ့ ငယ်ပါလဗြောင်ကွတ်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားလျက်။ စနေကျောင်းပိတ်ရက်ပေမယ့် အဖေနှင့်အမေက အလှူအိမ်သွားလို့ ကန်ထရိုက်တိုက်ခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်တည်းအေးဆေး။ ”အောင်အောင်”တို့သားမိ သားဖ(၃)ဦးထဲ နေတဲ့ တိုက်ခန်းကအိပ်ခန်း(၂)ခန်းနှင့် ဧည့်ခန်း(၁)ခန်းအရှေ့မှာဝရံတာ ပီးတော့မီးဖိုခန်းရယ်။ TVကဧည့်ခန်းမှာထားတာကြောင့် ရှိသမျှအပေါက်တွေရဲ့ တံခါးတွေကိုပိတ်ထားပီး မဟုတ်တရုပ်ကားကြည့်နေတာ။ အသံတိတ်ကြည့်နေရပေမယ့် ဆော်ကိုလေးဘက်ထောက် အနေအထားနဲ့ နောက်ကနေအသဲအသန် ဆောင့်ဆောင့်သွင်းနေတဲ့ ပုံစံကိုကြည့်ရတာ အားရတယ်။ဇာတ်လမ်းလည်းပြီးသွားရော ”အောင်အောင်”တစ်ယောက် ချုပ်တည်းထားတဲ့စိတ်တွေလွတ်ဖို့အတွက် မီးဖိုခန်းရှိအိပ်သာထဲအပြေးဝင်ခဲ့သည်။ ဂွင်းတိုက်ပြီးအာသာဖြေတဲ့အခါ စိတ်မှန်းရင် ပိုပြီးဖီးလ်တက်သယောင်မဟုတ်လား? ဒီတော့(၉)တန်းကျောင်းသူပေမယ့် ဖွံ့ဖွံ့ထွားထွား ကြောင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူထင်ရတဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းမလေး ”ခိုင်နှင်း” ကို စိတ်ကူးပုံဖော်ပြီး ပစ်မှားနေသည်။ သူမကတကယ်ကို စွဲဆောင်မှုရှိပြီး သူမကိုမြင်လျှင်စိတ်တွေထကြွတတ်သည်။ (၉)တန်းဟုမထင်ရက်စရာပင်။ သူရောဘာထူးလဲ?(၉)တန်းကျောင်းသားရဲ့ အဖိုအင်္ဂါတဲ့။ ကြည့်စမ်း […]
တကယ်တော့ဒီဇတ်လမ်းကလေးသည်သိပ်ထူးထူးဆန်းဆန်းတော့ မဟုတ်လှပါ။ဖြစ်တတ်သည့်ဇတ်လမ်းကလေးသာဖြစ်ပါသည်။သို့ သော် အမှန်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘူးသည့်ဇတ်လမ်းကလေးဖြစ်ပါသည်။ ဤဇတ်လမ်းစတော့မေသူမှာအိမ်ထောင်ကျပြီးဖြစ်ပါသည်။အသက် လည်း ၂၃ နှစ်ရှိပါပြီ။မေသူစအိမ်ထောင်ကျတော့ အသက်၂၀ ခန့်သာ ရှိပါသေးသည်။မေသူမှာအရပ်မနိမ့်မမြင့် အသားညိုညို တောင့်တင်း ကားထွက်နေသောတင်ပါးများဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကျနသူလေး ဖြစ်ပါသည်။ဆယ်တန်းတုန်းကရည်းစားနှင့်ပင်အိမ်ထောင်ကျပြီးသူနဲ့ ကျမှဘဲမေသူ့အပျိုစင်ဘဝကိုပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။မေသူဆယ် တန်းမှာကျောင်းကမဟုတ်သောအပြင်လူ သူနှင့်ချစ်ကြိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး သူကမေသူ့ထက်အသက်လေးငါးနှစ်ကြီးပါသည်။မေသူ၏ယောက်ကျား နာမည်မှာကိုမြင့်ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီတခုတွင်အလုပ်လုပ်ပါသည်။ နောင် မေသူဆယ်တန်းအောင်တော့ ကိုမြင့်ကမေသူကိုတက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းဆက်ထားပေးပါသည်။မေသူသည်အဝေးသင်တက္ကသိုလ် သို့တက်ရောက်သည်ဖြစ်သဖြင့် အနီးကပ်တစ်လသင်တန်းကိာတက္ကသိုလ်အနီးအမျိုးသမီးအဆောင်တခုမှနေရပါသည်။ ပြောရလျင်တော့မေသူသည် ယောက်ကျားမရခင်အထိ မည်သည့် တစိမ်းယောက်ကျားနှင့်မှထိတွေ့ဆက်ဆံဘူးခြင်းမရှသေးသောအပျို စင်ကလေးဖြစ်ပါသည်။ခေတ်၏သမီးပျိုကလေးဖြစ်သဖြင့် ဖုန်းမှတဆင့် ယောက်ကျားနှင့်မိန်းမလိင်ဆက်ဆံကြသောအောကားများကြည့်၍ကိုယ့်ဘာသာတော့အာသာဖြေတတ်ပါသည်။ ထို့နောက်ယောက် ကျားရတော့ယောက်ကျားနှင့်လိင်ဆက်ဆံပြီူကာမအရသာခံစားရ သည်ကိုအထူးနှစ်သက်ခုံမင်သူလေးဖြစ်လာပါသညိ။အသက်ကလည်း ၂၀ ကျော်ခါစသွေးသားဆူဖြိုးသည့်အရွယ်ဖြစ်သဖြင့်အမြဲလိုလိုသွေး သားတောင့်တနေတတ်သူကလေးဖြစ်လာပါသည်။ တိုတိုပြောရလျင်တော့ အနီးကပ်သင်တန်းတက်ရောက်ရန် အဆောင်တွင်ယောက်ကျားနှင့်ခွဲနေရတော့ သုံးလေးရက်နှင့်ပင် သွေးသားကတောင့်တထကြွလာပြန်ပါသည်။အစကမခွဲစဘူးခွဲရသဖြင့် အိမ်ကယောက်ကျားကိုလွမ်းမိသည်ဟုထင်သော်လည်း တကယ် တမ်း ကျတော့ လိင်ဆက်ဆံစိတ်ထကြွလာခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းကိုယ့် ဘာသာရိပ်မိလာလေသည်။ပထမနှစ်နှင့်ဒုတိယနှစ် အနီးကပ်သင်တန်း တက်ရောက်ခဲ့စဉ်က ဒီလိုဘဲကိုယ့်ဘာသာကြိတ်မှိတ်၍ ပွတ်သပ်အာ […]
“မသစ္စာ” “ရှင်…ကိုအေး” “ကျနော်..မသစ္စာ..ကို.ချစ်တယ်” “သိပါတယ်..ကိုအေး…ဒါပေမယ့် သစ္စာအကြောင်း ကိုအေးဘယ်လောက်သိလို့လဲဟင်” “ကျနော်သိသင့်သလောက်သိပါတယ်၊ မသစ္စာက အပျိုမဟုတ်ဘူး.. တစ်ခုလပ်ဆိုတာလေ” “ဟုတ်တယ်..ကိုအေး အဲဒါတွေကအမှန်ပဲ” “နောက်ပြီး မသစ္စာယောက်ျားကို ကျနော်မြင်ဖူးပါတယ်” “အော်..ဟုတ်လား” “ဟုတ်တယ်မသစ္စာ၊ ဒီလူက.လူယုတ်မာပဲ” “ဘာဖြစ်လို့လဲ” “မသစ္စာတို့အကြောင်းတွေလူတကာကိုလည်း ပြောနေတာ၊ အဲဒါမသစ္စာသိလား” “သိပါတယ်” “ဗျာ” “ဘာလဲ ကိုအေး.. သစ္စာကိုစိတ်ပျက်သွားပြီ မဟုတ်လား” “အဲလိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာ၊ ကျနော်မသစ္စာကို လက်ထပ်ပါရစေ” “ကိုအေး..သေချာစဉ်းစားပြီးမှ ကျမဘဝကိုဝင်ခဲ့ပါ၊ ရှင်ပြန်ရုတ်သိမ်းချင်လဲ ဖြစ်ပါတယ်” “မဟုတ်ဘူး..မသစ္စာကျနော်မသစ္စာကိုချစ်တယ်။ အဲဒါတွေသိနေတာကြာပါပြီ၊ ကျနော်သေသေချာချာ စဉ်းစားပြီးမှကို ချစ်ရေးဆိုခဲ့တာ၊ အခုလက်ထပ်မယ်” “..သေချာလေးစဉ်းစားပါ.၊ သစ္စာ..ဘဝက တခုလပ်ကနေ နှစ်ခုလပ်နှစ်လင်ကွာဘဝ မဖြစ်ချင်ဘူး” “မသစ္စာ..ကျနော်လူကြီးစုံရာနှင့်လာတောင်းမှာပါ” “မဟုတ်ဘူး ကိုအေးသစ္စာလည်း ကိုအေးကို သဘောကျပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် သစ္စာအကြောင်းကို သစ္စာသေချာရှင်းပြမယ်၊ ကိုအေးဆုံးဖြတ်ပါ” […]